Guddoomiyaha Gobolka oo la hadlay dad dibad baxyo dhigayay | Somali National Television - sntv.so
Home SAWIRO Guddoomiyaha Gobolka oo la hadlay dad dibad baxyo dhigayay
Guddoomiyaha Gobolka oo la hadlay dad dibad baxyo dhigayay
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Mudane Thabit Cabdi Maxamed ayaa maanta la hadlay wadayaasha bajaajta ee magaalada Muqdisho oo dibad baxyo cabasho ah ka dhigayay magaalada.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo dhex galay dhallinyaradii dhigayay banaanbaxa ee km4 ayaa dhagaystay cabashadooda, waxana uu u sheegay in uu wax ka qaban doonaan arrimaha ay ka cabanayaan, balse dhallinyarada looga baahanyahay inay kala shaqeeyaan maamulka dhowrida ammaanka.
“Dhallinta bajaajta wadaay, ma dhaceyso in la idin dulmiyo, ee waxaa diyaar u nahay difaaciina, idinkuna kaalinta sugida Nabadgelyada qaata, oo iska diiwaangeliya Degmooyinka aad ka howlgashaan si berri marka wax idin gaaraan ay idiin caawiyaan” ayuu yiri Guddoomiye Thabit.
Dhalinyaradii banaanbaxa dhigayay ayaa u sacaba tumay guddoomiye Thaabit waxana ay ballanqaadeen inay la shaqeyn doonaan maamulka gobolka Banaadir balse ay ka rajeynayaan in wax laga qabto cabashadooda, halka qaarkoodna ay bilaabeen inay sawiro ka qaataan oo mobayladooda ku sawirtaan guddoomiye Taabid.
Wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa haatan caadi ku soo laabtay, iyadoo markii hore ay xooga hakad gashay isu socodka gaadiidka dadweynaha.
Dhalinyaro careysan ayaa burburiyay mid kamid ah gaadiidka ciidamada AMISOM meel ku dhow isgoyska Lambar 4 waxaana halkaa ka cararay ciidamadii saarnaa gaadidka kadib markii ay lagu soo xoomay.
Previous articleGuddoomiye Jawaari oo aaday safar dibadda ah
Next articleGolaha Shacabka oo ka dooday soo dhoofinta badeeco dalka laga heli karo